Cristiano Ronaldo: Aniga Ayaa Ka Fiican Xilligan La Joogo Lionel Messi. - jornalizem
Cristiano Ronaldo: Aniga Ayaa Ka Fiican Xilligan La Joogo Lionel Messi.
Xiddiga kooxda Real Madrid Cristiano Ronaldo aya sheegay inuu aaminsan yahay xilligan la joogo inuu ka fiican yahay laacibka kooxda Barcelona ahna laacibka sannadka adduunka Lionel Messi.
Ronaldo ayaa warkaan ku sheegay wareysi gaar ah oo uu siiyay TV-ga laga leeyahay Mareykanka ee CNN, waxaana uu sheegay inuu ku daalay isbarbardhiga mar kasta lagu sameeyo isaga iyo Messi.
CR7 ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyay in xafiiltanka ka dhaxeeya isaga iyo Messi ay ka dhigtay horyaalka La liga mid xiiso leh, isalamarkaana ay sabab u yihiin in Barcelona iyo Real Madrid ay yihiin kooxaha ugu fiican adduunka.
“Dadka qaar waxa ay yiraahdaan aniga ayaa ka fiican Messi, halka dadka qaar ay yiraahdaan inuu Messi iga fiican yahay, lakiin maalinta ugu danbeysa, iyaga ayay jirtaa inay go’aansadaan ciyaaryahan ugu fiican” ayuu Ronaldo ku sheegay wareysi gaar ah oo uu siiyay TV-ga CNN.
“Xilligaan la joogo, waxaan qabaa inaan aniga ahay ciyaaryahanka ugu fiican” ayuu yiri Ronaldo isagoo qoslaya.
“Mararka qaar isbarbardhiga aniga iyo Messi waan ku daalaa, isaga xitaa wuu ku daalaa sababtoo ah mar kasta ayay isbarbardhig nagu sameeyaan”
“Isma barbardhigi kartida gaari Ferrari ah iyo gaari Porsche ah sababtoo ah waxa ay kala leeyihiin matooro kala duwan. Isma barbardhigi kartid. Shaqada ugu fiican ayuu u qabtaa Barcelona, anigana shaqada ugu fiican ayaan u qabtaa Madrid”
“Waxaan qabaa inaan mararka qaar aan tartankeena meel sarre geyno, waana sababta tartanka uu u yahay mid aad u sareeya. Waa sababta Madrid iyo Barcelona ay u yihiin kooxaha ugu fiican aduunka, sababtoo ah qof walba meeshii ugu sareysay ayuu geynayaan ciyaartiisa, kaliya ma ahan aniga iyo Messi lakiin ciyaartoyda kale xitaa”.